I-Nelson Mandela Bay Metro Survey yeZiko loThutho lweMfuno zoThutho
YINTONI UKUFUMANA KWE-UNIVERSAL? I-Universal Access yinjongo ekhulayo yehlabathi ukwenzela ukuba bonke abemi, bobabini kunye nabakhubazekileyo, bakwazi ukufikelela kwiindawo zoluntu kunye neendlela zokuthutha. Amandla okufikelela kumathuba oqoqosho kunye neenkonzo zoluntu lilungelo lomntu oyintloko kwaye kufuneka livunyelwe, ngokubanzi kunokwenzeka, ngokubonelela ngokufanelekileyo iinkonzo zikawonkewonke kunye noyilo lweziseko.
UBANI UKUTHI UKUTHOLA UKUFUMANA KWAMANZI? I-Universal Access inceda wonke umntu, kungekhona kuphela abo baneemfuno ezithile ezibangelwa ukukhubazeka. Abantu basebenzisa izithuthi zikawonkewonke, ukuhamba, ukuhamba ngebhayisikili kunye nabasebenzisi beemoto abazimele bonke bangazuza kule njongo yoFikelelo oluPhezulu. Oku kuvunyelwe ukuba, iimfuno ezithile zomsebenzisi kufuneka ziqwalaselwe ngabantu abafana nokukhubazeka, ukukhubazeka kwengqondo, abantu abadala, abantwana, abanakekeli abahamba kunye nabantwana abancinci, abafazi abakhulelweyo njl.
KUNGANI SIFUNA IINKONZO? Ukulungiselela ukucwangcisa okungcono ukufikelela kwi-Universal Access kwiNelson Mandela Bay Metro, iiNjineli kunye nabaCwangcisi kufuneka baqonde iimfuno zamaqela athile. Idatha efumanekayo ekhoyo iyakuthintela oku, ngoko ifuna iinkqubo zokuqokelela idatha njengale mibuzo.
YINTONI IINKCUKACHA EZIFUNA? Le mibuzo linamacandelo amahlanu, nganye inenjongo ethile:
1. Ungubani wena - Sicela igama lakho kunye neenkcukacha zoqhagamshelwano. Le mibuzo iyimfuneko kwaye ingahlawulwa ukuba unokhuseleko kunye neengxaki zobumfihlo. Asikwabelani le ngcaciso kunye nenkampani yokuthengisa kunye nolwazi oluyimfihlo lugcinwa luyimfihlo. Isicelo segama kunye neenkcukacha zoqhagamshelwano ziya kuvumela umasipala ukuba akhe isiseko sedatha yabasebenzisi abakhethekileyo kunye neemfuno zabo. Ukongezelela, unokuqhagamshelana ukuba uMasipala angathanda ulwazi oluninzi malunga neemfuno zakho ezizodwa.
2. Iqela lakho labantu - Le nto ifuna ukuchonga ubudala bakho kunye nesini ukuze sikwazi ukwahlula phakathi kweemfuno zamaqela ahlukeneyo omsebenzisi.
3. Iipatheni zakho zokuhamba - Ukukunceda ukucwangcisa inkqubo ukuhlangabezana neemfuno zakho, sifuna ulwazi malunga nokuba uhamba ukusuka phi ukuya kwixesha, ukuhamba kwehambo lwakho kunye nendlela yokuhamba.
4. Iimfuno zakho zokufikelela kwi-Universal Access - Sicela ulwazi malunga neemfuneko zakho xa uhamba. Uhlobo luni lweemfuno zakho kunye nobunzima obujamelana nayo kwicandelo ngalinye lohambo lwakho? Oku kusenza sikwazi ukucwangcisa iinkonzo kunye nezibonelelo ukujongana nemingeni yakho.
5. Intlawulo yeenkonzo zothutho -Le nto iya kusinceda siqonde iindleko zokuhamba kubasebenzisi abakhethekileyo kunye neendlela zakho zokuhlawula ezikhoyo / ezikhethiweyo.
Le mibuzo yenzelwe ukusinceda siqonde iimfuno zakho zokufikelela kwi-Universal neenkonzo zokuyila kunye nezibonelelo ukuhlangabezana nale mfuno. Nceda uthathe ixesha lokugqiba le mibuzo kwaye ube yinxalenye yokudala ithuba elihle lokuthutha wena kunye nabo bonke abahlali baseNelson Mandela Bay Metro.